* La dagaallanka infakshanka khaas ahaan cudurrada bakteeriyada ay keento.
* Xoojinta difaaca jirka iyo ka sifeynta jirka sunta iyo waxyaabaha khatarta ah.
* Madax xanuunka
* Ilko xanuunka
* Hargabka iyo Durayga
* Xanuunada dheefshiidka ku dhaco
* Xanuunada lafaha
* Neefta iyo Sanboorka
* Xajiinta iyo Allerjiga
* Sonkorowga / Kaadi macaanka
* Neefta: Qaado buuxda oo saliid xabad sowdo saafi ah ku qaso koob coffee ah laba jeer maalintii, xabadkane marso habeen kasta muddo usbuuc ah, waxaa kaloo isku qiiqisaa uumiga adigoo ku dhibciya biyo kulul oo aad isku dabooshay. (baaritaan lagu sameeyay dalka malaysia waxaa lagu ogaaday in Neefta ay ku daaweeyeen qaabkaan aan kor ku sheegay.
* Sonkorowga: Takhaatiir u dhalatay dalka India waxay sheegeen haddii Koob buuxa oo miraha xabad sowdada ah, koob haafkiis miraha geedka bagalka "watercress seeds" iyo koob haafkiis qolofta rummaanka "pomegranate peel", kadibne la isku shiido, kadibne qaado haafkeeda oo waxa shiidan ah lagu qasto qaado saliid xabad sowdo ah, subax kastane quraacda ka hor la isticmaalo muddo bil ah, waxay sheegeen in sokorta ay dajinayso oo qofka daawo kaga maarmi karo!!!
* Sanboorka iyo Cabburka: Isku uumi ama isku qiiqi saliid xabadsowdada adigoo ku dhibicya biyo aad u kulul kadibna isku daboola illaa aad safiican ugu neefsatid.
* Madax xanuunka: Madaxa foolka iyo dhinacyada oo lagu daliigo saliid xabad sowdada waxaa la ogaaday inuu u roonyahay madax xanuunka loo yaqaanno "Tension headache iyo Cluster headache", akhriso noocyada madax xanuunka: http://somalidoc.com/smf/index.php/topic,298.0.html
* Murqo xanuunka: sidoo kale ku daliig meesha lagaa hayo, muddo 5 daqiiqo ah.
* Xanuunada lafaha iyo Roomatiisamka: Sidoo kale takhaatiir shiinees ah waxay sheegeen haddii saliidda xabad sowdada la qandiciyo kadibne lagu daliigo xubinta ku xanuunayso illaa jirka safiican u gasho, kadibne hal qaado oo saliid xabad sowdada oo la cabo sedex jeer maalintii in ay daawo u tahay xanuunka roomaatiisamka "Rheumatoid Arthritis".
* Ilkaha iyo Cirid xanuunka:Miraha xabad sowdada oo lagu kariyo Khalka "Vinegar", kadibna ku dar saliid xabad sowdo, subax kastane ku cadayso iyadoo cajiin camal ah.
* Quumanka: Caruurta quumanka ku soo noqnoqdo, waxaa dhuunta loo mariyaa saliid xabad sowdo, habeen kasto markay jiifanayaan, subaxiina iyadoo shiidan ayaa afka laba far qaadkeed loogu shubaa, tan waxay ka hortagaysaa bararka iyo infakshanka quumanka.